zavatra maro no nampihetsika ny mpanabe tamin’ny taona 2018 toy ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana sy ny fijerena ireo fandrisika na “indemnité” izay efa nilaozan’ny toetr’andro ary olana maro samihafa. Nifanatona tamin’ny tompon’andraikitra ary nisy ny vahaolana niaraha-nanasonia ka namoahana ny “note de conseil” Réf 034/2018/PM/SGG/SC ny 10 jolay 2018 tamin’izany, ohatra, ny fanomezana ampahany tamin’ireo fandrisika, hoy izy ireo. 100.000 ariary no nifanarahana fa homena ny mpiasan’ny fanabeazana rehetra tsy ankanavaka. Notsinjaraina fa ny oktobra 2018 ny 25.000 ariary, ny janoary 2019 ny 25.000 ariary ary janoary 2020 ny 50.000 ariary. Nifanarahana koa ny fandraisana ho mpiasam-panjakana mpanabe miisa 8000 ka hojerena manokana ireo maherin’ny 45 taona. Hijerena vahaolana ireo mihoatra ny 55 taona. Omena fankasitrahana (bonification) ireo mpampianatra “FRAM/Vacataire”. Azo ny fandrisika taona 2018 saingy ireo mpampianatra na “personnel enseignant” ihany kosa no nahazo ny 2019. Tsy mandeha ary tsy mbola misy ilay fankasitrahana na “bonification”. Tsy voavaha koa ny olan’ireo “FRAM/Vacataire” be taona. Tsy voasoratra anaty taratasim-bola hatramin’izao ny 50.000 ariary tokony ho noraisina ny janoary teo. Manoloana ireo fitarainana sy fitakiana tsy voavaly ireo moa dia miantso ny mpampianatra sy mpandraharaha rehetra eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy fampiofanana teknika na MENETP hanao fihaonambe eny amin’ity toerana ity ihany anio ny PASEM.